Mini induction kululeeyaha gacanta lagu kululeeyo kululeeyaha la qaadan karo
Bogga ugu weyn / Heer-qabatada Indhasharada gacanta / kuleyliyaha yar-yar ee kululeeyaha / Mini kululeeyaha kululeeyaha
Categories: Heer-qabatada Indhasharada gacanta, Kuleyliyaha kuleylka, Qalabka kululeynta kuleylka, kuleyliyaha yar-yar ee kululeeyaha Tags: kuleyliyaha gacanta ku haynta, Qalabka kululeynta HLQ, kululeeyaha induction, naqshadeeye kuleylka kuleylka, soo-saaraha kuleylka kuleylka, keenida kululeeyaha kuleylka, kuleyliyaha yar-yar, kuleyliyaha guuritaanka wareega, kuleyliyaha la qaadan karo kuleylka, kuleyliyaha firfircoonida yar
Qalabka kululeeyaha-yar ee gacanta kululeeyaha-qalabka gacanta kululeeyaha-Magnetic Inductor wuxuu siidaayaa dhalooyinka lugta ka xirmay, xirmooyinka iyo xajiyeyaasha baabuurta, xamuulka, beeraha, hagaajinta doonta.
Qalabka yar ee gacanta ku haya kuleyliyaha gacanta kuleylka kuleylka-Magnetic Inductor. KIA-1000W waxay isticmaashaa magnetic kululaynta induction teknolojiyada kuleylka lagu daaweynayo qaybaha yaryar ee gawaarida, mashiinnada, qaybo bir oo kaladuwan iyo polyetylen. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu kululeeyo noocyo kala duwan oo gambaleel leh xawaash, nuts, gears, Pulleys, pulleys, bearings, dareemayaal, iwm. Ma jiro olol furan, looma baahna in laga fogaado agab kala guban kara sida balaastigga; biyo qaboojin la'aan, hawlgal badbaado leh, adeegsi sahlan oo si fudud loo qaadi karo.
Kuleyl deggan, fududahay in la isticmaalo banaanka iyo gudaha. Ma jiro gubasho, badbaadin badbaado oo ka kooban qaybaha kale, kor u qaadista waxtarka shaqada. Ma dhaawaceyso qaybaha u dhow kuleylka. Wax ku yeeli mayso qaybaha ku xeeran caag ama bac. Olol furan. Mabda ': Isticmaalka kululaynta birta iyo birta aan ahayn birta korantada ku jirta waxay u rogi kartaa daboolka cas qalab kululaynta induction 20 sekan gudahood. Ma jiro kuleyl ololaya oo furan oo xaqiijinaya amniga hawlgalkaaga. Qalabka caagga ah iyo waxyaabaha lagu dhejiyo ayaa sidoo kale lagu kululayn karaa laguna dhejin karaa agabyada qalabka. Baaxadda adeegsiga: furitaanka mashiinnada korantada, ka saarida mashiinka korantada korantada-culus, wareejinta adag ee boortaha, furitaanka mashiinka isbeddelka, ka-saaridda mashiinnada xilalka kala duwan, ka-qaadista xargaha vinyl iyada oo aan lahayn miyuusik ama caag, ka saaridda tuubbooyinka iyo marinnada AC. , kululaynta iyo fidinta beeruhu Khafiifka suunka ayaa fududaynaya in la rakibo, miridhku, iyo cillad sanka laga saaray, oo waxaa loo isticmaali karaa kala-goynta warshadaha iyo qalabka kala duwan.
Mashiinadan kaliya kuma haboona dukaan dayactirka baabuurta, 4S dukaan, dukaan dayactirka mootada, dayactirka qadka warshadaha, dayactirka farsamada, dayactirka qalabka qalabka, waaxda dayactirka qeybta, qeybta saadka, kaydinta qalabka, laakiin sidoo kale loogu talo galay tabinta qalabka, garaashka qalabka dheeman. , Daaweynta kuleylka ee qaybaha yar yar, qadar yar oo bir qaali ah (dahab, qalin, iwm.) Xoqid, qadar yar oo birta ka samaysan, iwm.
Kala furfurida cabirro kala duwan oo bir ah oo guntin kara.
Kuleylka kuleylka bolniiyadaha gogosha, midhaha, geeraarka, jiidjiidka, burooyinka, beeruhu.
Kuleylka kuleylka qalabka aaladaha soo noqnoqda ee sare, sida vise, hammer, pliers, wrench.
Kuleylka iyo kala-goynta khadadka wax soo saarka kala duwan, qalabka farsamada, qeybaha qalabka saxda.
Xakameynta kuleylka sare ee kuleylka qalabka kala duwan ee qalabka xarkaha.
Alxamida carbide waxay aragtay kaadi haysta ilkaha waaweyn iyo kuwa yaryar.
Xarkaha bulshda ah, qaybaha alxamida, kafeega.
Alxamdulilaanta silsiladaha dahabka.
Wershadaha elektaroniga: fiilooyin aad u fiican, qaybo kala duwan oo elektiroonig ah, qaybo ganaax, ganaax iyo lacag iibis ah.
Warshadda makaanikada iyo korantada: kala-goysyada birta ganaaxa ah, matoorrada naxaasta leh ee birta ka samaysan ee bir-naxaas ah, guntinnada iyo dillaaca iyo kulayl kale.
Warshadaha Wire: Xariga xargaha qabashada induction.
Warshadaha Toy: Clockwork sheet bir khafiif ah waa la qaboojiyey.
Duubista mindiyaha: mindiyaha warqadaha iyo xirmooyinka kabaha waa la demin doonaa.
Qalabka alwaaxyada kaladuwan, sida: faashad, maarugta iyo daaweynta kale ee kuleylka
Waxyaabaha dareeraha ah sida tuubbada mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka, sida mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka buluuga ah ee buluuga ah.
Kuleylka kuleylka ah ee mashiinada qufulka badan ee mootada iyo mootada, sida: crankshaft, rodolida isku xirida, biinka piston, camshaft, valve, geesaha kaladuwan ee galka, fargeeto kaladuwan, guluubyo kala duwan, gudbinta xawaaraha sare ee kudhaca kuleylka daaweynaya kuleylka daawaha, noocyo kala duwan biinanka birta yar yar ee gacanta lagu garaaco, hubka dhagaxa kala duwan, fallaaraha dhagaxa iwm.
Alaabtan ayaa isla markiiba lagu kululayn karaa 800 digrii, olol furan lama sameeyo, biyo qaboojin looma baahna, qalliinkuna waa mid ku habboon.
Haddii uusan si ula kac ah u waxyeelloobin ama si qaldan u shaqeynin, sheyga ayaa la dammaanad qaadayaa 1 sano
Awood shaqo Hal waji110v, 50Hz / 60Hz
Hal waji 220V, 50Hz / 60Hz
Kala duwanaanta danab hawlgalka 100V-120V
Awoodda wax soo saarka 1KW
Soo noqnoqoshada isbeddelka 30-100KHZ
Soosaarka hadda 10A
Barta heerkulka 85 ℃
Certification CE ， UL, CCC ， Loo heli karaa COC, POVC
Wareegga shaqada 100%
Qalabka ayaa la socda kuleyliyaha Mini Induction.
Dia 30mm gariiradda xabbadood 2
Dia 40mm gariiradda xabbadood 2
Dia 50mm gariiradda xabbadood 2
Dhererka 750mm fiiloyinka xargaha DIY xabbadood 2
Xaraashka kuleylka kuleylka xabbadood 2
Qaboojiyaha kuleylka ee fogfog